Izimboni emgqeni: njengoba kuthiwa - Ngento okufanele ugqoke amashiya avamile kanye ne-varnish emagumbini ekwindla nasentwasahlobo, ebusika, ehlobo
Ama-fashion sneakers on a wedge (izitebe) ziye zaba ukutholakala kwangempela kubalandeli besitayela samahhala. Ziyakwazi ukugqoka nganoma yisiphi isikhathi sonyaka: entwasahlobo, ekwindla ebusika ngisho nasehlobo. Amantombazane kudingeka nje anqume ukuthi angahlanganiswa nani. Kuzosiza kulokhu okukhethwa kwemifanekiso ngezithombe ezinamasheya emgqeni (izithombe namavidiyo). Izincomo zabadwebi zizokwenza ukuthi zikhethe kanjani izingubo ezinhle kakhulu, nokuthi yini okufanele uzigqoke onobuhle obungapheliyo bezicathulo ngekhanda evamile noma eligqamile.
Ama-sneakers okuqala emgqeni - njengoba abizwa, nokuthi yiziphi izingubo abazigqoka
Izicathulo zanamuhla, ezidalwe abakhi bomhlaba, zihlukile komunye nomunye ukuthi kunzima ukuhambisana nemikhuba yefashini. Isibonelo, ama-sneakers angavamile anepulatifomu ephakeme, efana nezicathulo, efakwe ku-wardrobe yabo bonke abalandeli bezitayela ezintsha ngo-2011. Ngesikhathi esifanayo akubona bonke abazi ukuthi bayini ama-sneakers emgqeni. Kunezinhlobo eziningi zamagama ezicathulo, kodwa igama elivame kakhulu yilo "abafakezi", elisuselwa kuma-sneakers angamaNgisi (ekuhumusheni - amasinki).
Yiliphi igama lamasheya emaceleni futhi yini engayigqoke nayo?
Ungakwazi ukuhlanganisa abahlaziyi bezinhlanzi ezinhlobonhlobo zezingubo: kusuka ku-jeans elula kanye ne-trousers ukugqoka, i-sarafans. Kulesi simo, izitayela zezingubo ezinjalo ezisezingeni lesikhulumi kuzoba ukuhlanganisa okuhle kakhulu, kuningi kakhulu. Izitayela ezifanele kunawo wonke zihlanganisa:
Kodwa ukubheka okufanelekile emasongweni epulatifomu futhi ngokuzihlanganisa ngokufanele nezingubo, kudingeka ukhethe inhlanganisela yokuqala. Ungakhohlwa ngemincintiswano yembala, umehluko wezinhlobonhlobo zanamuhla zezingodo. Bangakwazi ukuhambisana nesiteji esifihliwe, umgqa ovulekile ophezulu nokuguqulwa okubonakalayo kusuka emgodini okhudlwana kuya epulatifini encane futhi ephezulu ene-thickness efanayo.
Yini okufanele ugqoke amasinki emgqeni ekwindla nasentwasahlobo - izibonelo zezingubo esithombeni
Izindebe ezisezingeni elihle emgqeni ziphelele ukugqoka ekwindla nasentwasahlobo, ngakho-ke wonke ama-fashionista adinga ukwazi ukuthi angazigqoka kanjani kulezi zonyaka. Ukusebenzisa izibonelo ezilandelayo ngezithombe namathiphu, akunzima ukubuyekeza ikhabethe lakho futhi udale izinhlanganisela ezimfashini zezicathulo ezithandwayo nezingubo zansuku zonke.
Izibonelo ezinesithombe senhlanganisela yamashiya emgqeni ngezingubo zentwasahlobo
Ngentwasahlobo, zonke izintombazane zifuna ukugqoka kalula futhi ngokunethezeka. Ngakho-ke, ukwakha inhlanganisela yangempela yezingubo ngezingcweti esiteshini, kuyadingeka ukhethe izinto ezikhululekile kusuka emakhakheni aminyene nesokunwebekayo. Isibonelo, izicathulo ezinjalo zingagqokwa ngaphansi kwezingubo ezisezingeni eliphezulu 7/8 noma i-jeans. Kodwa futhi bayoba kufanelekile ukubuka ngesigqoko sezemidlalo, isiketi sezemidlalo noma ama-shorts kanye ne-t-shirt, ijeketi elifushane.
Yiziphi izembatho zokugqoka ezisekwindla?
Ukuze ugqoke ama-sneakers ekwindla, akudingekile ukulinda amakhaza: lezi zicathulo zifanelekile ukugqoka ngisho nangamaconsi okushisa angabalulekile. Ngakho-ke, ingahlanganiswa nama-denim noma ama-short shorts (kunconywa ukuthi uwagqoke nge-kapron tights). Kanti futhi umphelelisi omuhle esithombeni esidalwe ukuhlanganiswa kwezicathulo emgqeni ngemidlalo yezemidlalo noma ngengubo yamahhala.
Izigaxa ezithakazelisayo emgqeni - nokuthi yini okufanele ugqoke izicathulo zesimanje zesibusika, isithombe
Ukugqoka amasinki ebusika kuvunyelwe kuphela uma kufudumala ngoboya noma ngokushisa okufudumele komoya. Ngakho-ke, kuyadingeka ukhethe izinhlanganisela zemfashini kuphela kulezo zikhathi lapho kungenzeka khona ukugqoka izicathulo ezilula. Funda kabanzi ngalokho ongakugqoka ama-sneakers emgqeni ebusika, kuzosiza ukukhethwa okulandelayo kwezincomo nezithombe.
Inhlanganisela yokuqala yasezingubo zasebusika namaSneakers - izibonelo zenhlanganisela
Izicathulo ezingavamile endaweni yesikhulumi zizogcwalisa ngokuphelele ikhabethe labesifazane, uma lihlanganiswa nezingubo zasebusika ezilula futhi ezikhululekile. Isibonelo, ukugqoka amasinki kuvunyelwe nge jeans efudumele, elk, leggings. Ukwengeza le nhlanganisela kuzosiza i-sweater yamahhala, ijaji elifudumele, i-pullover elula. Ukuhamba emgwaqweni ogqoke izitebe ezinomgodla kungaba nemikhankane ebusika efudumele, izingubo ezingcolile zoboya noma izindiza zebusika.
Nalokho ongakugqoka ama-sneakers emgodini ophezulu ehlobo - izibonelo ezinezithombe namavidiyo
Njengoba imfashini ibeka imithetho yokukhetha izingubo kwenkathi ngayinye, ehlobo amantombazane amaningi azokusebenzisa izitshalo ezinjengezithombe ezihlukahlukene. Ukuze benze lokhu, badinga kuphela ukufunda ukuthi kufanele bahlanganise kanjani izingubo ezipholile futhi ezilula nezicathulo epulatifomu. Izibonelo ezingezansi zizokusiza ukuthi wazi ukuthi ungembathisa yini amasinki emgodini ehlobo.
Ukukhethwa kwezithombe emithethweni yokuhlanganisa izitebe ezinezambatho nezembatho zasehlobo
Kuzo zonke izingubo ezikhethiwe ehlobo ezigqoka i-snikersov, kuzomele uzame ngesidingo esisodwa - "lula." Akufanele kube ukudala izithombe ezinemfashini ukuhlanganisa izicathulo eziwodwa kanye nezembatho ezivela emasongeni amancane. Kungcono ukukhetha izingubo ezijwayelekile, ukugqoka, ama-shorts ezenziwe ezintweni ezinhle kakhulu. Okufanelekile kuzobheka ama-sneakers emaceleni, kanye nama-sarafans amafushane, iziketi noma ama-breeches ezemidlalo kanye ne-T-shirt, i-T-shirt.
Ividiyo-isibonelo sokugqoka amasinki anezinhlobo ezahlukene zezingubo zasehlobo
Ukuhlola ngeso lengqondo izinketho zokugqoka ezihlongozwayo akukhona nje kuphela esithombeni, kodwa futhi ngosizo lwamavidiyo athile alandelayo. Kuzokuvumela ukuba ukhethe inhlanganisela yemodeli enhle ongayigqoka ehlobo ngaphandle kokungahambi kahle.
Ngezinto okufanele uzigqoke izigaxa ezinamacici emgqeni - izibonelo zenhlanganisela ngesithombe
Inye yezinhlobo ezingavamile kakhulu zezinyoka eziyisikhombisa eziyisikhombisa ezenziwe nge-patent lesikhumba noma i-dermantin. Kanti futhi kuleli qembu kungenziwa kuthiwe futhi onobuhle bezithombe ezinobuso obushelelezi. Udinga ukukhetha ingubo ngokukhathalela okukhethekile: ngaphandle kwalokho, akunakwenzeka ukufeza inhlanganisela efanele yezinto ezithombeni esenziwe. Ngakho-ke, ngaphambi kokudala inhlanganisela yemfashini, kunconywa ukuthi ufunde ngokuningiliziwe ukuthi yini ongayigqoka amashiya aqoshiwe emgqeni, enikezwe umbala nesitayela sabo.
Izibonelo zenhlanganisela yezingcweti ze-varnish esiteshini enezingubo zanamuhla
Amamodeli uSnykersov, anenhlawulo ephezulu ngokuphakama okufanayo, ubukeka kahle ngezikhwama ze-classic, nangama-dresses, kanye namashothikhathi. Kuyinto engaba yindlela yonke yokugqoka. Kodwa abashayeli abangenalo ukungalingani (okwedlula okuncane kuya kokubanzi) kungcono kuhlangene nezingubo ezinjalo:
jeans kanye namajeketi (ngaphansi kwejazi ongagqoka i-T-shirt, i-T-shirt noma i-blouse);
izingubo zokukhanya okuxekethile;
Kulesi simo, umbala wezicathulo ezikhethiwe nezembatho kufanele kucatshangelwe. Kufanele zifanane noma zihlanganiswe kancane. Futhi, abaklami bavumela inhlanganisela yomthunzi oyisisekelo wabantu be-snickers abanezimhlobiso. Isibonelo, isiliva zesiliva noma zegolide nezesihlabathi singagqoka ngaphansi kwanoma yikuphi ukugqoka. Kodwa ngaleyo ndlela ukugqoka imihlobiso kufanele kuhambisane ngokuphelele nombala we-sneaker.
Zonke lezi zincomo zizosiza abesifazane besimfashini ngokushesha futhi kalula bakhiqize izithombe ezifake imfashini ezozivumela ukuba zigqoke izinhlamvu zabo ezizithandayo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ngakho-ke, ehlobo bangakwazi ukugqoka izicathulo ezingavamile zokugqoka nezigqoko, futhi ekwindla kanye namahantshi kanye nama-jeans. Izibonelo ezinikezwe ngezithombe namavidiyo zizovumela ukuhlanganisa ngaphandle kwezinkinga ama-sneakers emgqeni nganoma yiziphi izingubo ezitayela ezahlukene. Kuhlala nje ukuze ujwayele izincomo zamasethrithi, buka imibukiso yefashini bese ukhetha okukhethwa kukho okuthandayo. Emva kwakho konke, kungenzeka ukuthi ubukeke kahle kuma-sneakers avamile noma ahlanzekile entwasahlobo, ekwindla, ebusika nasehlobo: nje udinga ukukhumbula imithetho yokukhetha izembatho ezinhle futhi ungakhohlwa mayelana nesimo sakho somuntu siqu.
I-Avant-garde classic: indlela yokuhlanganisa izitebe ngezinto zakudala
Izimbatho ezingu-8 zezimfashini zekwindla nobusika
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanele zokugqoka
Indlela yokukhetha izicathulo eziphezulu eziphezulu
Amabhuzu anamanzi aphezulu
Izindawo zokuqasha okokuqala
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo we-cinnabar
Ingaphakathi ngesitayela saseMoroccan
Yini evunyelwe umyeni ngokuqondene nomkakhe e-Islam?
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - Owesifazane waseScorpio - kusukela eTamara Globa no-Angela Pearl
Ukuthuthukiswa kanye nombuso wengane yengane ezinyangeni ezingu-3
Izimfihlo zempilo enhle nokuphila isikhathi eside
Umlingisi u-Alexander Suvorov
Amagilavu ​​amade - isitayela sehlobo: indlela yokukhetha nokugqoka ngo-2017